Zimbabwe military helicopter fires teargas at demonstrators in Harare
More violence is expected on the Zimbabwean streets on day two of the national shutdown, with reports saying that the opposition Movement for Democratic Change offices in Harare were set alight last night.
A Zimbabwean military helicopter has fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires on the second day of protests after the government more than doubled the price of fuel.
Soldiers have moved in to disperse crowds at the busy intersection and transport hub in the capital, Harare, amid Zimbabwe’s biggest unrest since deadly post-election violence in August.
Police moved in after protesters chanted for the removal of President Emmerson Mnangagwa and as looting broke out in Bulawayo, a stronghold of opposition to the ruling Zanu-PF party
The Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights on Tuesday reported the death toll as many businesses in the capital, Harare, and other cities were closed following Monday’s violence.
This is Zimbabwe’s biggest unrest since deadly post-election violence in August.
State security minister Owen Ncube says lives were lost, police officers were injured and the property was damaged.
He says more than 200 people were arrested and blames the main opposition MDC party and some civil society groups for the violence